Android တွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော application များကိုဖယ်ရှားရန် Androidsis
Ignacio လိုပက်ဇ် | 05/04/2021 14:00 | Android application များ, လဲ tutorial
Android တွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော application များကိုဖယ်ရှားပါ။ အဖြစ်လူသိများ bloatware, အစဉ်အမြဲ (နှင့်ကံမကောင်း, ဆက်လက်ဖြစ်လိမ့်မည်) ယခုအချိန်အထိအဘယ်သူမျှမထုတ်လုပ်သူက၎င်း၏ဆိပ်ကမ်းကနေလုံးဝပပျောက်ဖို့ဆန္ဒရှိသောပြproblemနာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, အော်ပရေတာဒီစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအလေ့အကျင့်စွန့်ပစ်ခဲ့ကြပြီးယနေ့ငါတို့ထုတ်လုပ်သူရဲ့ software ကိုသာတိုက်ထုတ်ရန်ရှိသည်။
ဒါပေမယ့် Android မှာအဲဒီပြproblemနာကိုကြုံခဲ့ရတယ် iOS မှာလည်းတွေ့နိုင်တယ်အက်ပဲလ်ကမေးလ်မေးလ်၊ Voice Notes၊ Compass၊ စတော့စျေးကွက်ကဲ့သို့သောမည်သူမျှအသုံးမသုံးသော application များကိုဆက်လက်ထည့်သွင်းရန်ဆက်လက်တောင်းဆိုနေသည်မှာသေချာသည်။ အပလီကေးရှင်းများအားဖယ်ရှားပစ်ရန် (အမှန်အားဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်) သည်ဖြေရှင်းရန်ထက်ပိုသည် Android ။
သုံးစွဲသူများစွာအသုံးမပြုရန် bloatware သို့မဟုတ်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါထုတ်လုပ်သူများ install လုပ်သောအသုံးအဆောင်များသာမကဘဲကျွန်ုပ်တို့လည်း t အကြောင်းပြောဆိုရမည်။odas နှင့် Google shoehorn နှင့်အတူထည့်သွင်းသော applications များအသီးအသီး Android နှင့်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိသည့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုချင်းစီတွင်ဖြစ်သည်။
1 Android တွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောအက်ပ်များကို ADB ဖြင့်ဖယ်ရှားပါ
1.1 developer ရွေးချယ်စရာ Enable
1.2 USB debugging mode ကိုဖွင့်ပါ
1.3 ADB app ကို download လုပ်ပါ
2 Android တွင် AppControl ဖြင့်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောအက်ပ်များကိုဖယ်ရှားပါ
3 ၎င်းတို့ကို uninstall မလုပ်ဘဲ Android ပေါ်ရှိ app များကိုပိတ်ထားပါ
4 ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ
Android တွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောအက်ပ်များကို ADB ဖြင့်ဖယ်ရှားပါ
နှစ်ပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်သူအများစုသည် Custom ROM များတပ်ဆင်ရန်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသူများအားအသုံးပြုသူများကိုတားဆီးခဲ့သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာပင်၊ terminal တွင်အမြစ်ခွင့်ပြုချက်မရှိခြင်းသည်ပြproblemနာမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့အားလုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်အခြားနည်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော application များကိုဖယ်ထုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော Google ADB developer application တစ်ခုသာလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော terminal command များမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့စက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မမြင်တွေ့လိုသော application များအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စက်တွင်သဲလွန်စမရှိဘဲကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုဖယ်ရှားရန် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အဆင့်လေးဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်ပါ:
developer ရွေးချယ်စရာ Enable
ပထမဆုံးလုပ်ရမယ် developer ရွေးချယ်စရာကို enable၊ ဤအရာများမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည် USB debugging mode ကိုသက်ဝင်စေမည့်နောက်အဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Android ရှိ developer ရွေးချယ်မှုများကိုသက်ဝင်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေရာရှိ menu ကိုဝင်ရောက်ရမည် နံပါတ်တည်ဆောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဗားရှင်း ဤအချက်အလက်ကိုများသောအားဖြင့်ဖုန်းရှိ System or Information menu တွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဤရွေးစရာကိုမီနူးများ၌သင်ရှာ။ မရပါကသင်ရှာနိုင်သည် ရှာဖွေရေး box ထဲကတဆင့်ရှာပါ သတ်မှတ်ချက်မီနူး၏ထိပ်တွင်တွေ့ရှိရပြီး၊ “ compilation” ဟူသောဝေါဟာရကိုကိုးကားခြင်းမရှိပဲတွေ့နိုင်သည်။
USB debugging mode ကိုဖွင့်ပါ
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့လုပ်ရမယ် USB debugging mode ကိုဖွင့်ပါ, USB မှတဆင့် terminal မှဆက်သွယ်မှုကိုရယူရန်ခွင့်ပြုသည့် mode ။ ဤအဆင့်မရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည့်လျှောက်လွှာသည်ကိရိယာနှင့်ဘယ်သောအခါမျှဆက်သွယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
USB debugging mode ကိုဖွင့်ရန်၊ ရေးသားသူရွေးချယ်စရာများ System menu ထဲမှရနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Debugging အပိုင်းကိုရှာပြီးခလုတ်ကိုသက်ဝင်စေသည် USB debugging.
ADB app ကို download လုပ်ပါ
လာမယ့်အဆင့်မှာ ADB application ကိုဒီကနေကူးယူရမယ် link ကို ကိုနှိပ်ပါ SDK Platform Tools ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း အတွက် Windows ကို / မက် o Linux ကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောလည်ပတ်မှုစနစ်ပေါ်မူတည်သည်။ ဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်ဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ unzip လုပ်သည် (ဘာမှထည့်စရာမလိုပါ)
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးလုပ်ရမှာဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ ထိုအချိန်တွင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် RSA သော့ဖြင့် USB debugging ကိုခွင့်ပြုရန်ဖိတ်ခေါ်စာကိုပြလိမ့်မည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ပစ္စည်းကိရိယာကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်၊ ကိရိယာသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ဆောင်ရွက်သည်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ operating system ၏ command window ကိုဖွင့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုမည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန် ADB ကို download လုပ်သောလမ်းကြောင်းမှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ မည်သည့်သဲလွန်စကိုမျှမကျန်ဘဲ root applications များကိုဖယ်ရှားပါ.
ထိုအခါ ကျနော်တို့ command line ကိုရေးပါကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင်ထည့်သွင်းထားသော application အားလုံးနှင့်အတူစာရင်းတစ်ခုကိုပြသရန်အတွက်ကိုးကားချက်များမပါဘဲ s "adb shell pm list lists"
ကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားလိုသောအပလီကေးရှင်း၏အမည်ကိုတွေ့ပြီဆိုပါက“ adb shell pm uninstall -k –user0package-name” ကိုကိုးကားပါ။ ကြှနျုပျတို့ ... လုပျရမညျ ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချင်တဲ့ application ရဲ့ name နဲ့ package-name ကိုအစားထိုးလိုက်ပါဤအမှု၌သော မင်္ဂလာပါ.
Android တွင် AppControl ဖြင့်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောအက်ပ်များကိုဖယ်ရှားပါ
ပိုမိုလွယ်ကူသည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာ Windows အတွက်သာရနိုင်သော ADB အက်ပလီကေးရှင်းထိန်းချုပ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်command interface ကို windows တစ်ခုမှအစားထိုးလိုက်ပါကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာမှဖယ်ရှားလိုသော application များကိုအလျင်အမြန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဤလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ပထမရမည် developer ရွေးချယ်စရာ Enable y USB debugging mode ကိုဖွင့်ပါကျနော်တို့ယခင်အပိုင်းတွင်ရှင်းပြခဲ့ကြသကဲ့သို့, ။
Android ရှိ developer ရွေးချယ်မှုများကိုသက်ဝင်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေရာရှိ menu ကိုဝင်ရောက်ရမည် နံပါတ်တည်ဆောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်း၏ System / Information menu အတွင်းရှိ (ဖုန်း၏ System / Information menu အတွင်းရှိ) ကျွန်ုပ်တို့သည် developer များအတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုမှန်ကန်စွာသက်ဝင်ကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုအတည်ပြုသည်အထိ နှိပ်၍ အကြိမ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။
ဤရွေးစရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ activate လုပ်ပြီးလျှင် application ကို download လုပ်သည် ADB App Controlယခုအချိန်တွင်များအတွက်လျှောက်လွှာ Windows အတွက်သာရနိုင်သည်ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်ဤ operating system ကိုအသုံးမပြုတော့ပါ၊ ယခင်အပိုင်းတွင်ရှင်းပြထားသော command line နည်းလမ်းကိုသင်အသုံးပြုရမည်။
Application ကို download လုပ်ပြီးတာနဲ့ Android device ကို PC နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပြီ။ လျှောက်လွှာ ADB App Control သည် executable တစ်ခုဖြစ်သည် နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ဖိုင်များအားလုံးပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင်တပ်ဆင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်တဲ့အခါ၊ ဖိုင်များနှင့်အိုင်ကွန်များ၏စီးရီးကို download လုပ်ပါလိမ့်မယ် အချက်အလက်များကိုပိုမိုဂရပ်ဖစ်နှင့်အသေးစိတ်ပုံစံဖြင့်ပြသရန်လျှောက်လွှာများ၏။
လျှောက်လွှာကအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ menu ကိုပြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့လျှောက်လွှာရဲ့ထိပ်ကနေပြောင်းလို့ရပါတယ်။ ES အက္ခရာများကိုနှိပ်ပြီးရရှိနိုင်တဲ့ဘာသာစကားအားလုံးကိုပြပါလိမ့်မယ်။ စပိန်ဘာသာလည်းပါဝင်သည်အောက်ပါပုံများတွင်တွေ့ရသကဲ့သို့
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာမှလျှောက်လွှာများကိုဖယ်ထုတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာပေါ်ရှိအပလီကေးရှင်းအားလုံးပြသထားသောပြတင်းပေါက်ကိုသာ scroll လုပ်ရန်လိုသည်။ သူတို့ကို select လုပ်ပါနှင့်လက်ျာကော်လံသွားပါ.
ဒီကော်လံမှာငါတို့ရွေးပါ options box ထဲမှာ uninstall, ငါတို့က option ကို uncheck လုပ် ဒေတာနှင့် cache ကိုသိမ်းထားပါ (အပလီကေးရှင်းမှအချက်အလက်အားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်) နှင့်ဖယ်ထုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် system မှမည်သည့်လျှောက်လွှာကိုမဆိုဖယ်ရှားလိုက်လျှင်၊ ကျနော်တို့ခြစ်ရာကနေ device ကို restore ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနိုင်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သိုလှောင်ထားသည့်အချက်အလက်တစ်ခုချင်းစီကိုဆုံးရှုံးရန်ဆိုလိုသည်။ Yes ကိုနှိပ်ပါ။
ထိုအပလီကေးရှင်းများကို၎င်းတို့ဖယ်ရှားပြီးနောက်ပြန်လည်ရယူလိုပါက၊ လုံခြုံရေးမိတ္တူ။ အဲဒါကိုအကြံပြုပေမယ့်မဖြစ်မနေမဟုတ်ပါဘူး။
သင်အက်ပ်များကိုလုံး ၀ ဖယ်ရှားပြီးသည်နှင့် တစ် ဦး configuration ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကို app ထဲမှာပြသပါလိမ့်မည်.
၎င်းတို့ကို uninstall မလုပ်ဘဲ Android ပေါ်ရှိ app များကိုပိတ်ထားပါ
ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ system မှ applications များကိုဖယ်ရှားသောအခါပိုမိုလွယ်ကူသို့သော်၎င်းသည်သဲလွန်စများကျန်ရှိနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုအသုံးပြုနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာမှဖယ်ထုတ်လိုက်သောအပလီကေးရှင်းများသို့ဖြတ်လမ်းများကိုရှာနိုင်သည်၊ ထို application ကိုထပ်မံတပ်ဆင်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည့်ဖြတ်လမ်းများ။
အပလီကေးရှင်းမှအပလီကေးရှင်းများကိုရပ်ဆိုင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ချိန်ညှိချက်များကိုကြည့်ရှုရန်ကိုနှိပ်ပါ applications များ ကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ထားလိုသည့် application ကိုရွေးချယ်ပါ။ လျှောက်လွှာရွေးချယ်စရာအတွင်းမှာ option ကို Uninstall / Disable.
ထို option ကိုပါ ပိတ်ထားမီးခိုးရောင်နေသည်ဤသည်ကိုမရရှိနိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုရပ်တန့်ရန်တစ်ခုတည်းသောရွေးစရာမှာ command line မှတစ်ဆင့် (Windows, macOS နှင့် Linux ရှိ) ADB AppControl application ဖြင့်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းအတွက် Windows အတွက်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်သောအခါ သိုလှောင်ထားသည့် ROM ကိုစနစ်ကပြန်လည်ရယူသည် နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်သည့်ဗားရှင်းကိုထုတ်လုပ်သူ၏ကိုယ်ပိုင် ROM မှပြန်လည်မယူပါကလည်ပတ်မှုနောက်ဆုံးအဆင့်ဗားရှင်းနှင့်အတူ။
ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုအမြဲတမ်းဖယ်ရှားပစ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာစက်ရုံ၏ ROM ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သူများ၏ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့မည်သည့်လမ်းအတွက်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါအနည်းဆုံးနောက်ဆုံးပေါ်စက်ကိရိယာများပေါ်မှာ။
ထုတ်လုပ်သူမှကမ်းလှမ်းသည်ထက်ကွဲပြားသော ROM ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းတွင်ဖန်တီးသူပါ ၀ င်သည့် application များသာပါဝင်သည်။ သင့်တွင်နှစ်အနည်းငယ်အရွယ်ကိရိယာရှိပြီး၎င်းကိုဒုတိယအကြိမ်အခွင့်အရေးပေးလိုပါကကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်သင်ရှာဖွေနေသောအဖြေမဟုတ်ပါ၊ သင်၏ hardware နှင့်ကိုက်ညီမည့် ROM တစ်ခုတပ်ဆင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android application များ » Android မှာကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောအက်ပ်များကိုဖယ်ရှားနည်း
[ဗွီဒီယို] Samsung Galaxy ရဲ့သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ
Android အတွက် Chrome တွင် adblock ထည့်သွင်းနည်း